Wararka Dibadda – Page 11 – Shabakadda Amiirnuur
Sarkaal katirsan Koonfur Galbeed Oo Baydhabo Lagu Weeraray.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa ka dhacay weerar toogasho ah oo loo geystay sarkaal katirsan maamulka Koonfur galbeed. Sarkaalka la weeraray ayaa lagu magacaabaa Manuur Amxaar, waxaana beegsaday rag hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Baydhabo waxay soo sheegeen in sarkaalka lagu weeraray meel […]
Maxaa Cusub Wararka Dibadda
Dowladda Sacuudiga ayaa ladaalaa dhacaysa dhibaatooyin isbiirsaday tan iyo markii ay duullaanka Melleteri ku qaadday wadanka Yemen. Waa Warbixin Video wadata oo daaha ka faydaysa khasaaraha aan kasoo waaqsashada laheyn ee Sacuudiga kasoo gaaray dagaalka Yemen iyo sida dowladdan ay dhaqaalaha ugu badan ugelisay soo iibsasha hubka nuucyadiisa kala duwan […]
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo booqday Yahuudda.
Waxaa markii ugu horeysa dhulka ku jira gumeysiga Yahuudda ee Filastiin gaaray ra’iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abey Axmed. Waxaa soo dhaweeyey dhigiisa Yahuudiga ah ee Bin Yamanin Natanyahu, iyadoona labada dhinac ay kawada hadleen sidii ay isaga kaashan lahaayeen qadiyado kala duwan oo ay kamid tahay amniga iyo dhaqaalaha. Ra’iisul […]
Ururka shiiciga ah “Xisbullaah” oo gubay Gaari dagaal oo Yahuuddu leeyihiin.
Xiisad dagaal ayaa soo kala dhexgashey ururka shiiciga ah ee “Xisbullaah” dadka muslimiinta ahna ugu yeeraan Xisbullaata iyo maamulka Yahuudda. Xiisadan ayaa timid, kagadaal markii dagaalyahannada Ururka ay gubeen gaari dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Yahuudda, waxaana xigay duqeymo ay Yahuuddu ku garaaceen dalka Lubnaan. Dowladaha Caalamka ayaa ka hadlay […]
Maraykanka iyo Xuuthiyiinta oo lagu wado iney wadahadallo yeeshaan.
Wargeyska World Street Journal ee laga leeyahay Maraykanka ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dowladda Maraykanka ay wado dadaallo ay ku dooneyso iney ku hor fadhiisato malleeshiyaadka Xuuthiyiinta, si loo soo afjaro howlgalka isbaheysiga carbeed uu ka wado Yemen. Wargeyska oo soo xiganayo ilo xog ogaal ah oo aad […]
Al-Bashiir oo kasoo muuqday Maxkmad ku taalla Suudaan.
Cumar Xasan Al-bashiir madaxweynihii hore ee wadanka Suudaan ayaa kasoo muuqday maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ah ee Al-khardhuum, isagoo loo jeediyay eedeymo waaweyn oo ay kamid tahay musuq maasuq. Al-bashiir ayaa isagoo xiran dharka hidaha iyo dhaqanka ee Suudaan, wuxuu kasoo dhex muuqday fadhiga maxkamadda, isagoo ku dhex jira […]
Milliteriga Suudaan iyo Mucaaradka Oo gaaray Heshiis Awood qeybsi ah.
Magaalada Al-khardhuum ee caasimadda wadanka Suudaan waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo lagu saxiixayay heshiis dhexmaray milliteriga Suudaan iyo mucaaradka wadankaas. Heshiiskan oo ay gar wadeen ka ahaayeen dowlado dhowr ah oo ay ku jirto Itoobiya ayaa waxaa awood qeybsi ku gaaray milliteriga iyo Mucaaradka, waxaana lagu heshiiyay in dowlad […]
Uncategorized Wararka Dibadda Wararka Gudaha
Mu’assasada As-saxaab, garabka warbaahineed ee Qaacidatul Jihaad ayaa baahisay bayaan uu ku saxiixnaa hogaanka sare ee Mujaahidiinta Al-Qaacida, kaas oo looga hadlay shirkii dhawaan kusoo idlaaday magaalada Manaama ee caasimada dalka Al-baxreyn, kaas oo ka dhignaa shirqool horleh oo la doonayo in lagu xaraashayo dhulka Filastiinta muslimka ah. Bayaankan oo […]
Mid kamida saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa markale lagu dilay dagaalka 18 sana jirsaday ee ka socda wadanka Afghanistan. War rasmi ah oo kasoo baxay Wasaaradda difaaca Mareykanka (The Pentagon) ayaa lagu sheegay in sarkaal sedax Xidigle American ah uu ku dhintay weerar ka dhacay gobolka Helmand ee Koonfurta Afghanistan. Sedax […]
“Ramadaanka iyo Muslimiinta Caalamka” Waa Barnaamij soo gudbinaya dhaqamada,cadaadaadka maxalliga ah iyo cibaadaadka muslimiinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Xalqadan waxaa lagu falanqeynayaa sida ay muslimiinta ku dhaqan wadanka Boosniya ugutaan bisha Barakeysan ee Ramadaan. Halkan ka degso barnaamijka